Procurement Officer (English-Fluent) | Aung Tha Bye Company Limited
Procurement Officer (English-Fluent)
Aung Tha Bye Company Limited
-Logistics Training ရရှိမည်။
-Inventory Management Training ရရှိမည်။
နိုင်ငံခြားမှ စက်ရုံများနှင့် ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်ရမည်။
-ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကို အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်။
-Will receive Logistics Training
-Will receive Inventory Management Training
Advanced fluency in English for communication with foreign suppliers and partners:
Manage supplier relationships:
-Shipment date management
-Document inquiries and revision with suppliers
-Re-ordering of low-stock inventory
-Revision of quality control reports
Strong computer usage skills:
Minimum two years of work experience inacompany setting:
-(Management/leadership experience preferred)
-(Experience in logistics is preferred)
ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းခွင်၌ အနည်းဆုံးအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ် ရှိခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
-Rewards for over-performance
-Highly frequent salary-increase opportunities
-International Trade Experience
အောင်သပြေကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာတစ်ပြည်လုံးတွင် လက်လီနှင့်လက်ကားဆိုင်အရောင်းပြခန်း (၁၇) ဆိုင်ဖြန့်ကျက်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ carpet နှင့် PVC flooring ဈေးကွက်၏ ( ၇၅% ) ရယူထားနိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အရောင်းပြခန်းများတွင်လည်း Belgian carpets, PVC flooring, Coil Mats, မိုးရေကာဖျင်နှင့် အခြား flooring ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ဖျာ၊ နေရောင်ခြည်ကာတို့ကို အောင်သပြေကုမ္ပဏီ၏ အရောင်းပြခန်း (၁၇) ခန်းတွင် စုံလင်စွာပြသ၍ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လက်လီလက်ကား ရောင်းချပေးနေပါသည်။ (၂၂) နှစ်တာမြန်မာပြည်၏ Belgian carpet နှင့် PVC flooring ဈေးကွက်တွင် ရပ်တည်လာနိုင်သော အောင်သပြေကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြည့်ဝပြီး ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော carpets, PVC flooring နှင့် မိုးရေကာဖျင် ထုတ်လုပ်သူများနှင့်သာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ မှာယူတင်သွင်းရောင်းချနေသောကြောင့် အောင်သပြေကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချသော carpets နှင့် PVC flooring ပစ္စည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းစံချိန်မှီ၍ ဈေးနှုန်းသက်သာသောပစ္စည်းကောင်းများကို ၀ယ်ယူသူများမှ တစ်ခဲနက်ထောက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်။ လက်လီလက်ကား အားပေးကြသော ဖောက်သည်များကြောင့် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့အောင်သပြေကုမ္ပဏီ၏ (၂၂) နှစ်တာကာလအတွေ့အကြုံများကို မိတ်ဆွေတို့နှင့်အတူ မျှဝေလိုသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ Website ၏ Company Profile သို့ဝင်ရောက် လေ့လာပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Since 1992, Aung Tha Bye Company Limited distributes high-quality flooring materials and other housing products at reasonable prices to the local market in both retail and wholesale segments. Our product range includes high-quality carpets, carpet-tiles, PVC flooring, Coil Mats, PE tarpaulin among other housing products produced by premium manufacturers from Belgium, Dubai, India, South Korea, Malaysia, Thailand, Vietnam and China. In addition to operating in the flooring materials market, Aung Tha Bye Company Limited functions in real-estate operations, hotel operations, agricultural exports, commerce of Aung Ba Lay Lottery, and licensed currency-exchange services.
Procurement Officer Hayman Capital Microfinance Co,Ltd IT, Facilities, Maintenance, Procurement Officer EDULINK Procurement Officer, Procurement Department Myanmar Brewery Ltd Purchasing (Chinese) City Global Mark Services Co., Ltd Buyer (Ready To Eat) Capital Diamond Star Group Fresh And Frozen Category Specialist Capital Diamond Star Group MERCHANDISING SUPERVISOR City Mart Holding Co.Ltd Vegetable Buyer (Southern Shan State) MyWorld Careers Co., Ltd. Purchasing Officer Grand Royal Group (GRG) Purchaser Golden Legend Group MERCHANDIZING ASSISTANT EXECUTIVE ( E-COMMERCE ) City Mart Holding Co.Ltd Procurement Executive British American Tobacco Myanmar